China Garlic Planter ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Lo mshini we-garlic planter ungasetshenziswa kabanzi emathafeni nasemagqumeni ukubona ukutshalwa kukagalikhi ngomshini esikalini.Ngokulungiswa kwekhanda likagalikhi, kungabona ukutshala okuqhubekayo kwendawo.
Kubekwe okungamaphoyinti amathathu
1. Ukucushwa okusebenzayo nokunengqondo kwawo wonke umshini kuqinisekisa ukuthi inqubo yokusebenza izinzile, inokwethenjelwa futhi isebenza kahle.
2. Ukuqondiswa kukgalikhi kusheshe kulungiswe ukuqinisekisa izinga lokusinda lokutshala.
3. Qhubeka ngokunemba imbewu ngokuqiniseka ukuthi utshala, uhlukanisa izikhala, nokuthi kuvame kangakanani ukuhlwanyela imbewu.
4. Ubuningi bokutshala nokufana kokutshala.
5. Usebenzisa amandla kagandaganda onamasondo amane, izindleko eziphansi, isakhiwo esilula, imisebenzi elula ukukala
Ukufakwa kweplantara nogandaganda: xhuma ukusekelwa okuphansi kokumisa kwepulaki nenduku yokumiswa kogandaganda engezansi, xhuma ukwesekwa kokumiswa okuphezulu nenduku yokumiswa ephezulu kogandaganda, bese ufaka iphini lesikhonkwane nokhiye wokuvala ngemuva kokuxhuma. Lungisa ukuxhumeka kokumiswa kwenduku yokudonsa okumaphakathi. Gqoka i-pin shaft nokukhiya iphini ngemuva kokuxhuma. Lungisa induku yokulungisa emaphakathi yohlaka lokumiswa, yenza umshini wokutshala ezingeni ngaphambi nangemva; lungisa ukumiswa kwe-hydraulic kwesokunxele nakwesokudla sokulungisa induku, yenza ifreyimu kwesokunxele nakwesokudla ezingeni; qinisekisa ukulingana kokudluliswa kwamaketanga nokwethembeka lapho umthwali esebenza.
1. Ukugcinwa ngaphambi kokungena ensimini, kufanele sihlanze amasundies ebhokisini lokuhlwanyela notshani nenhlabathi esivulekeni somsele ukuqinisekisa ukuthi isimo sihle, bese sengeza uwoyela wokuthambisa ezingxenyeni zokudlulisa nokujikeleza zikogandaganda umtshali ngokuya ngezidingo zemiyalo.
Uhlaka alunakutsheka, ngemuva kokutshalwa kukagandaganda nogandaganda, ungatsheki, umsebenzi kufanele wenze ifreyimu ngaphambi nangemva kwesimo esivundlile.
3. Zonke izinhlobo zokulungiswa zenziwa ngokuya ngemigomo ebekiwe kanye nezidingo ze-agronomic, inani lokuhlwanyela, isikhala somugqa wokuvula umsele, ukujula kokulungiswa komsele kufanelekile.
4.Naka ukungezwa kwembewu, engeza imbewu ebhokisini lembewu ukuze uzuze okuncane, okuxubile, ukuqinisekisa ukusebenza kwembewu; imbewu ebhokisini lembewu ngesikhathi sokusebenza ngeke ibe ngaphansi kwe-1/5 yevolumu yebhokisi lembewu; ukuqinisekisa ukukhishwa okushelelayo kwembewu.
Langaphambilini Umtshali Wokolweni
Olandelayo: Isifutho Esisebenzayo